Baranahiny eny Ivato? : sokatra 330 indray tratra tany Malezia | NewsMada
Baranahiny eny Ivato? : sokatra 330 indray tratra tany Malezia
Tsy mahalala menatra mihitsy ny fitondrana eto amintsika, manoloana ny fanondranana antsokosoko harena voajanahary eto Madagasikara. Hanamarinana izany, zary baranahiny mihitsy ny fanaraha-maso eny amin’ny toerana fivoahana any ivelany satria any Malezia no tratra ny sokatra 330 nivoaka teny Ivato.
Tratran’ny sampandraharaha ladoany any Kuala Lumpur, Renivohitr’i Malezia, ny alahady 14 mey teo, ny sokatra miisa 330, niainga avy aty Madagasikara. Voalaza fa tombanana hatrany amin’ny 276.800 dolara ireo sokatra ireo, biby arovana sy ahina ho lany tamingana ary voarara tsy azo amidy sy tsy azo aondrana any ivelany. Nambaran’ny tompon’andraikitra any Malezia fa mety hamidy ao amin’ny tsena ao anatiny, na haondrana indray any amin’ny firenen-kafa ireo sokatra ireo. Olon-tsotra tany an-toerana no nanome ny vaovao ny ladoany malezianina nahatrarana ireo sokatra ireo, natao tao anaty valizy dimy, ary velona avokoa izy ireo.
Tsy voalaza ny tompony nitondra azy ireo, fa raha ny lalàna any Malezia, voasazy telo taona an-tranomaizina ny heloka toy izao. Eto amintsika, tsy nahenoam-peo ny tompon’andraikitra. Izany eo ihany, fa tsikaritra kosa fa tsy mitsahatra mihitsy ity trafika sokatra ity, taorian’ny fanondranana antsokosoko andramena. Midika izany fa misy tambajotra matanjaka, tsy vitan’ny fitondrana mihitsy ny mandray fepetra henjana, na koa misy ny firaisana tsikombakomba amin’ny tompon’andraikitra samihafa eny amin’ny seranam-piaramanidina, toy ny eny Ivato, ohatra, matoa tafavoaka ireo biby arovana ireo. Volabe rahateo ny vidin’ny sokatra any ivelany, satria manodidina ny 1.000 dolara ny iray, araka ny fanazavan’ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny tontolo iainana Durrell.